बहुप्रतिक्षित नयाँ सामसुङ ग्यालेक्सी एफ २२ मा के छ त्यस्तो ? दराजले प्रि- बुकिङ्ग सुरु गर्यो - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
शुक्रवार, श्रावण २२ गते २०७८
# भिटामिन डी
बहुप्रतिक्षित नयाँ सामसुङ ग्यालेक्सी एफ २२ मा के छ त्यस्तो ? दराजले प्रि- बुकिङ्ग सुरु गर्यो
२०७८ श्रावण, ६ बुधवार
काठमाडौँ / नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले नयाँ ग्यालेक्सी एफ २२ ९क्बmकगलन न्बबिहथ ँद्दद्द० को प्रि– बुकिङ्ग सुरु भएको घोषणा गरेको छ। दराजले सामसुङसँग नेपालसँग साझेदारी गरेर यस्तो घोषणा गरेको हो ।
ग्यालेक्सी एफ २२ को लन्च सँगै सामसँगको एफ सिरिज नेपालमा पहिलो चोटी भित्रिदै छ।
ग्राहकहरु अब दराज एपमार्फत श्रावन ६ देखि ग्यालेक्सी एफ २२ को प्रि–बुकिङ्ग गर्न सक्नेछन्।
के छ त्यस्तो सामसुङ ग्यालेक्सी एफ २२ ?
सामसँग ग्यालेक्सी एफ २२ अक्टा कोर मिडियाटेक हिलियो जी ८० प्रोसेसोरले सुसज्जित छ र यसमा दुई कर्टेक्स ए ७६ कोर र छ कर्टेक्स ए ५५ कोर (तधय अयचतभह ब्ठट अयचभक बलम कष्ह ऋयचतभह ब्छछ अयचभक ) रहेको जनाएको छ । ।
शक्तिशाली र सुध्रिढ प्रदर्शन यो फोनको आकर्षण हो। यसै गरि सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ को डिस्प्लेको कुरा गर्दा यो फोन मा ६.४ यच डि इन्फिनिटी–यु सुपर आमोलेड डिस्प्ले रहेको छ भने त्यो डिस्प्ले कोर्नारिंग गोरिल्ला ग्लास ५ मार्फत सुरक्षित राखिएको छ।
यस्तै, ग्यालेक्सी ग्यालेक्सी एफ २२ एन्ड्रोइड ११ र वान यु आई कोर ३१ मा चल्छ भने एसले प्रयोगकर्ताहरुलाई सरल डिजाइन दिनकासाथ फोनलाई आफु अनुकुल बनाउन सकिन्छ।
सुरक्षाको लागि को फोन को छेउ पट्टि फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र अगाडी को क्यामेरा मा फेस अनलक को फिचर उपलब्द छ।
क्यामेराकोको कुरा गर्दा ग्यालक्सी एफ २२ मा क्वाड क्यामेरा सेटअप रहेको छ जसमा ४८ यम पी वाइड क्यामेरा, ८ यम पी अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, २ यम पी म्याक्रो क्यामेरा, २ यम पी देप्थ साथै ीभ्म् फ्ल्याश, प्यानारोमा र यच डि आर जस्ता अन्य फिचर्सहरु रहेको छ।
यो क्वाड सेटपले सुन्दर तस्बिर र हाई रेजोलुसन भिडियोहरु खिच्न सरल रुपमा सम्भब बनाउदछ। साथै, फ्रन्ट क्यामेरा ८ यम पीको रहेको छ जसबाट स्पष्ट र प्राकृतिक फोटोहरु सजिलैसंग खिच्न सकिन्छ। क्यामेरा का थप अन्य बिशेस्थाहरु भने फूड मोड, हाइपरल्याप्स, स्लो मोशन, एआर जोन र प्रो मोड रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
र अब सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ श्रावन ३ (जुलाई २१) देखि दराजमा प्रि-बुकिंगको लागि उपलब्ध हुनेछ भने ९ श्रावन (२७ जुलाई) देखि शिपिंगका लागि उपलब्ध हुनेछ।
दराजले अहिले नेपालका ४७ भन्दा बढी शहरहरूमा डेलिभर गर्दछ र दराज मार्फत तपाईले यो फोन आफ्नो घरको ढोकामै मगाउन सकिनेछ ।
एक वर्षको ब्रान्ड वारनटि, १४ दिन रिटर्न पोलिसीको पनि ग्राहकहरुले मज्जा लिन सक्नेछन्।
ग्राहकहरूले ग्यालक्सी एफ २२लाई दराज मार्फत जिरो प्रतिशत ब्याज ईयमआइ ९भ्ःक्ष्० मा पनि खरीद गर्न सक्दछन्। ग्यालेक्सी दुई एफ २२ भेरियेण्टमा उपलब्ध छ – ४ जीबी राम र ६४ जीबी स्टोरेज, र ६ जीबी राम र १२ जीबी स्टोरेज ।
४ जीबी को मूल्य रहेको छ रु २०,४९९ भने ६ जीबी को मूल्य छ रु २३,९९। ग्यालक्सी एफ २२ कालो र लाईट ब्लुमा उपलब्ध छ।
यसै गरि, दराज महाबचात बजार मा खरिद गरे थप छुट हरु प्राप्त गर्न सक्छन।
महाबचत बजारमा कुनै पनि सामान खरिद गरे ग्राहकहरुले म्याक बुक प्रो १३ पनि जित्ने मौका पाउनेछन्।
# सामसुङ ग्यालेक्सी
ओपोद्वारा फ्ल्याश चार्जिंङ प्रविधि सार्वजनिक, कठिन परिस्थितीमा पनि सटिक चार्जिंग
दूरसञ्चार प्राधिकरणको परियोजना : ६६३ स्थानीय तहमा पुग्यो इन्टरनेट
डिशहोम फाइबरनेट सेवा जनकपूरमा विस्तार
कृषि ज्ञान केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक
विद्युत उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक ग्राहकको शुल्क पनि घटाउछौँ - ऊर्जामन्त्री
संसारमा सबैभन्दा धेरै पटक कोरोना संक्रमण देखिएको यी व्यक्ति, जसले श्रीमतीसँग मागेका थिए मृत्युको औषधि
प्रशस्त धनआर्जन गर्ने मन छ ? बिहान उठ्नसाथ यसो गर्नुस्
आज काठमाडौँमा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको तरकारी र फलफूलहरू कुन कुन छन् ?
याद रहने सपनाहरू स्वास्थ्यका लागि किन खतरनाक हुन्छन् ?
यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइपिओ सूचीकृत, आपेनिङ रेञ्ज कति तोकियो ?
भगवान शिवको प्रिय धतुरोको फाइदा भरपुर, तर प्रयोग गर्नुअघि तपाईले जान्नै पर्ने यी कुरा